Edemede site na Sumiya Sha
Sumiya bụ onye edemede nke weebụsaịtị Mgbasa mgbasa ozi. Dịka onye edemede ọdịnaya, Sumiya nwaleela ọtụtụ atụmatụ websaịtị ma nwee olile anya isoro ndị na-agụ ya kerịta ha.
Ndụmọdụ 10 Maka ingmepụta Websitelọ Ọrụ Ezigbo Thatlọ nke Na-eme Ka Ndị Na-azụ Ihe na Ndị Na-ere Ọsọ Ga-ekere òkè
Zụta ụlọ, ụlọ, ma ọ bụ ogige bụ ego dị mkpa… na-eme naanị otu ugboro na ndụ. Mkpebi ịzụ ala na ụlọ na-akpali ndị mmụọ mmetụta na-emegiderịta onwe ha mgbe ụfọdụ - yabụ enwere ọtụtụ ihe ọ dị mkpa ka a tụlee mgbe ị na-emepụta weebụsaịtị ụlọ na-enyere ha aka njem njem ịzụta. Gị ọrụ, dị ka ihe gị n'ụlọnga ma ọ bụ ezigbo ala na ụlọ ore, bụ ịghọta mmetụta uche mgbe na-eduzi ha kwupụta a ezi uche na